TOMATO LIANG: HABOON IYO DARYEEL WANAAGSAN - NOOCYO YAANYO
Way adagtahay in la doorto nooca gaarka ah ee yaanyada ee noocyada kala duwan iyo noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan. Bannaanka u badan iyo bannaanka u door bidaan inay beeraan on ay site gaar ah oo la yaqaan iyo waqti-tijaabiyey. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa yaanyada Liana.
Noocyo kala duwan Liang
Waa dillaac iyo isla mar ahaantaana noocyo kala duwan. Laga soo bilaabo xilliga muuqaalka of caleemaha koowaad si goosashada degdeg ah, qiyaastii 85-100 maalmood gudub.
Warshadu waa gaaban, dhererka duurka waa 40-50 cm oo keliya, waxay leedahay jeexan dhexdhexaad ah, laakiin kobaca badan ee caleemaha. Ma khuseyn karo noocyada caadiga ah. By nooca koritaanka - go'aan qaadashada, baadiyaha waxaa ugu wanaagsan loo sameeyay hal asliga ah.
Yaanyo Liyaan waa warshad aad u fara badan oo cagaaran oo cagaar ah oo cagaar ah. Duufaannada ugu horeeya waxaa la dhigaa kore 5-6 caleen, iyo dhammaan kuwa ku xiga - ee 1-2 caleemo.
Yaanyada Kuwani waa noocyo ugu wanaagsan ee yaanyada ee bari ee Ukraine. Kala duwanaanshuhu wuxuu ku fiican yahay koritaanka labadaba xaaladaha dhulka u furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo. Warshadu waxay u adkaysataa isbedelka heerkulka isla markaana waxay awood u leedahay inay bixiso goosashada wanaagsan xitaa xaaladaha cimilada xun. Iyada oo daryeel ku haboon, warshad baadiyaha ah waxay bixisaa 2-3 kilo oo yaanyo ah.
Warshadu waxay gebi ahaanba difaacdaa kalluunka miraha ah ee apical iyo sidoo kale waa mid aad u adkaysi u qalalan iyo bakteeriyada. Laakiin isla waqtigaas, waxaa laga yaabaa in uu ku dhaco fayraska tubaakada.
Ma taqaanaa? Miraha cusub ayaa ku jira boqolkiiba ballaaran oo carotene ah. Waxaa lagu talinayaa in la goosan karo oo la hirgeliyo dalagga isla markiiba ka dib marka uu ku faafayo.
Calaamadaha tamaandhaynta Liang: Tamaandhada waxay leeyihiin qaab isku dhafan iyo cabbir yar. U istaag midabkooda midabka cas ee dhalaalaya. Celceliska miisaanka midhaha waa 50-80 g, tamaandhada waxaa lagu daboolaa maqaarka maqaarka ah, dhexdhexaad ah. Miraha waa cufan yihiin oo celcelis ahaan waxay leeyihiin 2-3 qolladood, oo leh tirada miraha ku saabsan qiyaasta 0.30% miisaanka guud ee midhaha. Qodobka qallalan ee macdanta aan ka badnayn 6%, sonkorta - 4%, asiidhku aad ayuu u hooseeyaa wuxuuna u dhexeeyaa 0.4 ilaa 0.8%.
Tamaandho waxay u dulqaadanayaan gaadiidka iyo kaydinta muddada dheer. Xaaladaha fudud (heerkulka hawada ee kala duwan oo lagu daray 8-10 digrii iyo qiyaasta qiyaastii 85%), miraha waxay ku sii jirayaan 2.5-3 bilood.
Tomato Liana casaan waa noocyo kala duwan oo yaanyo ah. Waa in la yiraahdaa yaanyadani ma aha noocyo kala duwan oo Liang ah qaabkeeda saafiga ah, maadaama Liang yahay casaan - waa gebi ahaan. Hase yeeshee, Yaanyadaas waxay ku fiican yihiin ilaalinta, qaadashada ama qaadashada. Waxa kale oo loo isticmaalaa soosaarista suugada kala duwan, miirka iyo nadiifinta. Noocyo badan oo nafaqo ah ayaa ka dhigaya qayb muhiim ah oo cunnuga cuntada ah. Tamaandho waa mid aad u fiican, midabkooda kala-duwan waxay u tahay dhadhan macaan iyo mid yar.
Noocyada noocan ahi waxay leedahay faa'iidooyin badan oo gaar ah:
iska caabida cudurrada badankood;
dhadhan fiican macaan;
qiimaha nafaqada sare;
Dhibaatooyinka laga yaabo inay ka hadlaan:
u nuglaanshaha waxyeellada musqusha;
Khatarta sare ee khatarta weerarka ee cayayaanka kala duwan;
phytophthora, cudur uu soo muuqan karo marka uu sii kordhayo geedka ciidda furan.
Sidee si madaxbannaan u abuurto abuurka yaanyada geedo
Wixii beerto yaanyada hoose ee taangiga waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo lakabka dheecaanka. Tani waa lagama maarmaan si loo yareeyo khatarta suurto galka ah ee loo geysan karo geedo ka mid ah "lugta madow" - oo ah phytophase phoenix.
Dhagax weyn oo la jajabiyey ayaa lagu shubay koobab caag ah oo la tuuri karo oo leh lakab ah 0.5 cm, ka dibna isku dar ah ciidda ayaa lagu shubay. Dhammaan tani waxay ku shubeysaa biyo heerkulka qolka, ka dibna koobabka waxaa lagu daboolay filim waxaana lagu hayaa sidan 5-6 saacadood. Wakhtigaas oo kale, qoyaanku wuxuu si siman u simayaa dhammaan mugga carrada.
Kadibna, iyadoo la adeegsanayo cadayga, niyadjab yar ayaa la sameeyaa - qiyaastii 0.5 cm. Mid kasta oo ka mid ah, mid ka mid ah abuur ayaa si taxadar leh loo yareeyaa. Iyada oo isla cadayga, grooves ayaa si tartiib ah loo rusheeyey, xoogaa cadaadis leh hoos u. Goobta dhulku waxay ku qoyan tahay faleebo caadi ah, oo ciidda xitaa markaa way madhan tahay. Ka dibna koobabka la socota waxyaabaha ku jira waxaa lagu daboolay filim waxaana lagu riday meel diiran, halkaas oo heerkulku yahay + 23 ° C labada maalinba iyo habeenkii.
Xilliga ugu habboon ee beeritaanka yaanyada waa dhammaadka guga, taasoo u noqonaysa xagaaga hore. Waqtigaan, heerkul maalmeedka wuxuu u dhexeeyaa +22 ilaa + 25 ° S, habeenkiina marar dhif ah hoos ayay u dhaceysaa + 15 ° S. Waxaa ugu wanaagsan in la bilaabo beeritaanka geedo dhul furan galabtii. Biyaha geedo dhawr saacadood ka hor geedo. Tani waa si loo hubiyo in foosto yaryar ay si fiican uga saaraan weelasha ay ku yaalaan ee hore ee geedo.
Sidoo kale, ha helin geedo, haddii aadan qorshaynin si dhakhso ah u bilaabaan inay beeraan. Xaaladdan oo kale, dhirta ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay u rogaan oo xitaa si muuqata hoos ugu dhigaan koritaanka. Ka hor inta aadan beerin, qodo godadka yar yar si aad uhesho cabbirka koobabka. Buuxi godka leh Bacriminta dheeraad ah: humus, ash alwaax iyo macdan. Geedo geedo aad u taxaddir leh si aanay u dhaawici nidaamka xidid jilicsan - xididdada warshadda waa in lagu hagaajiyaa hoos. Taas ka dib, ku shub oo ku saydhaa godka leh lakabka dhulka qalalan.
Waqtiga ugu habboon iyo qaabka degitaanka
Marka la go'aaminayo wakhtiga beeritaanka yaanyada, sii wad xaqiiqda ah in inta lagu guda jiro 15-20 maalmood ee ugu horreeya ka dib muuqaalka caleemaha ugu horeeya, yaanyada ku koraan si aad u tartiib ah, sababtoo ah xilligaan waxaa jira dhisme of xididdada. Taas ka dib, yaanyada waxay si muuqata u koraan si firfircoon, iyo ka dib 40 maalmood, koritaanka masska daaqsinka ma dhaco maalmo, laakiin saacado.
Laga soo bilaabo nidaamka beeritaanka - waxa ay ku xiran tahay kala duwan ee geedo. Sidaas yaanyada sii kordhaya Waxaa lagu talinayaa in lagu beero fogaan ah oo ku saabsan 60 cm inta u dhaxaysa saf ah iyo 30-40 cm inta u dhaxaysa dhirta isla isku xigta. Yaanyada dheeriga ah beeray fogaan ah 70 cm inta u dhaxaysa safarka iyo 50 cm u dhexeeya dhirta naftooda. Waxaa lagu talinayaa in la beero tamaandhada qaab habaysan. Laakiin haddii aad isticmaashay miraha, ka dibna tilmaam qorshaha beeraha. Waxaad ka heli kartaa xirmada, kaas oo iibiya miraha yaanyada Liang.
Ka dib markii dalagyada sida ugu fiican loo beeray
Noocyada ugu fiican ee tomato ee Len waxa ka mid ah kaabajka, karootada, digirta, basasha, bocorka, qajaarka, iyo toonta.
Laakiin kiis kasta, ha ku beeri geedo yaanyada meelaha meelaha horey u koray cadaan kale, oo ay ku jiraan eggplant, basbaaska, baradhada. Tani waa in laga fogaadaa hal sabab macquul ah - dhirta noocan oo kale ah waxay ka jirtaa cudurada isla markaana ay saameeyaan cayayaanka isku midka ah.
Waa muhiim! Haddii aad tahay milkiil beerta khudradda yaryar, oo aadan haysan fursad aad ku raacdo wareegga dalagga saxda ah, iyo su'aasha ah in la beerto tamaandhada ka dib, taas oo aad u daran, ka dib goosashada ka dib, ku beeray siderata sariiro beerta, iyaga u qodo jiilaalka, oo si geesinimo leh u bilaw beerto yaanyada meeshan .
Koraaya yaanyada hore ee Liam
Haddii degitaanka la qorsheeyay wax yar ka hor, ha iloobin hoyga la isku halleyn karo. Ciidda for seedling noocan oo kale ah waa mid bacrin ah, laakiin waqti isku mid ah oo si caddaalad ah dabacsan.
Tamaandhada si fiican u kora oo u koraan si dhakhso ah haddii ciidda ay ku koraan waxaa lagu buuxiyaa qoyaan leh 85-90%. Tan waxaa lagu baari karaa iyadoo la adeegsanayo hal hab oo fudud - tuujin kara buro dhul ah oo ka qoday qoto dheer 10 cm dusha sare. Haddii buro si fudud loo sameynaayo, iyo marka si khafiif ah loo cadaadiyo, waxay burburisaa, markaa tani waxay muujinaysaa qoyaan ciid ah oo ku filan.
Ka dib markii laga beerto geedo dhul furan, iyaga biyo badan sida ugu macquulsan iyo ka sii badan. Geedka tamaandhada ayaa si xun u saameeya labada cidhiidhi ah, waraabinta dhif ah iyo aad u badan, badan. Kiis labaad, biyaha ayaa yarayn kara heerkulka carrada, tani waxay si xun u saameyn doontaa ugxanta miraha mustaqbalka.
Waa mid aad u faa'iido leh in la isticmaalo dambaska iyo maraqyada qallalan ee loogu talagalay quudinta yaanyada marka la koray xaaladaha dhulka ee furan.
Waa muhiim! Ha iloobin in xilliga jiilaalka, warshadda waa in la quudiyo 2-3 jeer leh maadooyin. Si aad tan u samayso, u qaad 5 kiniin oo ku salaysan hums, ku dar oo ku dar 0.5 litir oo biyo ah, ka dibna ku dar 10 litir oo biyo ah. Isticmaalka bacriminta noocan ah waa 1 litir oo baadiyaha ah.
Ciidda ee yaanyada u kobcaya waxay u baahan yihiin dabacsanaan joogto ah iyo jaridda dhirta. Loosening wuxuu u oggolaanayaa xididada in uu neefsado, oo markaas ciidda ayaa markaa ka sii deynaya qoyaanka. Loosinta ayaa lagula talinayaa iyadoo lala socdo cayayaanka.
Foosha ugu horeysay waa la fuliyaa isla markiiba ka dib markii beerista yaanyada ee ciidda furan. Kadibna nidaamka waxaa lagu celiyaa 2 asbuuc walba. Si loo dabciyo ciidda waa in ay ahaataa qoto dheer oo yar - qiyaastii 4-6 cm.
Muuqashada iyo dhirta dhirta: ma u baahan yihiin
Tamaandho koray in lagu koriyo ayaa u baahan pousing joogto ah. Tamaandhada koraya ee bannaanka u furan ayaa si fiican u qaban kara. Waxaa badanaa lagula taliyaa in ay qaaddo qanjirada si ay u hesho goosashada hore. Sida caadiga ah, 1-2 lugood oo waaweyn ayaa laga tegayaa, iyo guurka soo baxaya ayaa si fudud looga saarayaa. Haddii aad qorsheyneyso inaad hesho dalag goosi ah, ka dibna ka tag oo dhan carruurta kore. Laydhka Liyuu marwalba wuu ku faraxsan yahay Bisaylka miraha. Horeba bilowga bisha Agoosto waxaa jiri doona ugu yaraan 5-6 buraash kasta oo baadiyaha ah.
Kalluunka qulqulaya uma baahna garaf. Haddii yaanyada ay yihiin kuwo waaweyn oo si xoog leh u leexinayaan dhirta, markaa waa in lagu xiraa si looga fogaado midabka miraha.
Shuruudaha Bisaylka Miro
Ereyga Bisaylkiisa Tamaandhiga laga bilaabo wakhtiga beeritaanka abuurka ah ee goosashada waa 85-110 maalmood. Tan iyo tan waa noocyo hore bislaada, hore u bislaaday ee yaanyo waxay keenaysaa baahida korodhay ee iibsadayaasha.
Ma taqaanaa? Tomato Lyana waa mid u gaar ah in midhaha yihiin ku haboon ee processing in ku dhowaad kasta oo Bisaylkiisa.
Kala duwanaanta Liana waa mid gaar ah oo tayo leh oo ka duwan noocyo kale oo yaanyo ah. Inta badan milkiilayaasha dacha iyo beeralayda, isku dayeen inay koraan mar, ka dibna ku beeri sanad walba. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale isku daydo?